AHOANA NO MANAMBOATRA SARY TUMBLR TSY MANISY LESOKA - MALEMY
Ahoana no manamboatra sary Tumblr tsy manisy lesoka
Tumblr dia haino aman-jery sosialy sy sehatra bilaogy bilaogy bitika hafa ahafahan'ny mpampiasa mandefa ny bilaoginy sy ny atiny hafa amin'ny famoronana profil. Ireo mpampiasa koa dia afaka mandalo sary, horonan-tsary ary bilaogy navoakan'ny olon-kafa teo amin'ny lampihazo. Mety tsy i Tumblr no sehatra haino aman-jery sosialy malaza indrindra, saingy mahazo ny lazany eo amin'ny tsena miaraka amin'ireo mpampiasa voasoratra anarana maherin'ny 472 tapitrisa ao amin'ilay lampihazo.
Mampalahelo fa mpampiasa maro no mitaraina noho ny sary tsy mavesatra ao amin'ny Tumblr. Tahaka ny sehatra media sosialy hafa koa, Tumblr koa dia mety manana olana ara-teknika na hadisoana pesky indraindray sy avy eo. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny antony mety hitranga ao ambadiky ny sary tsy mamoaka ao amin'ny Tumblr izahay ary manisy lisitra ihany koa ny vahaolana hamahana ireo sary Tumblr tsy diso.
ny fomba fampidirana ny solo-sainako amin'ny birao Windows 10
Antony mahatonga ny Tumblr tsy mamoaka sary
Fomba 1: zahao ny fifandraisana Internet
Fomba 2: Mampiasà Browser hafa
Fomba 3: Atsaharo ny fanitarana U-Block
Fomba 4: Mampiasà rindrambaiko VPN
Fomba 5: Diniho raha ambany ny Servers Tumblr
Betsaka ny antony mety mitarika ny lesoka amin'ny Tumblr ary manakana anao tsy hampiditra sary. Ireto ambany ireto ny lisitr'ireo antony iraisana mahatonga ny Tumblr tsy hampiditra sary.
1. Fifandraisana Internet tsy marin-toerana: Raha mahazo fifandraisana Internet tsy mitombina amin'ny PC na telefaona ianao dia mety hiatrika sary tsy mandefa lesoka amin'ny Tumblr.
2. Fifamoivoizana amin'ny mpizara: Ny olan'ny sary tsy mavesatra dia mety noho ny fifamoivoizana be loatra amin'ny mpizara Tumblr. Raha maro ny mpampiasa an-tserasera amin'ny fotoana iray dia mety ho be loatra ny mpizara.
3. Fepetra amin'ny atiny sasany: Mametra ny atiny sasany tsy mety amin'ny mpampiasa sasany i Tumblr. Ankoatr'izay, ny sehatra dia mametra ihany koa ny atiny sasany amin'ny firenena na fanjakana samihafa. Ireo fetra ireo dia mety hisakana anao tsy hampiditra sary.
Efatra. U-Block AddON: Misy add-on marobe amin'ny tranonkala mpitety tranonkala izay azonao ampidirina mba hisorohana sy hanakanana ny pop-up doka. U-Block Addon dia misy toy ny fanampim-panazavana toy izany izay manakana ny tranokala tsy hanao doka ary mety hisoroka ihany koa ireo tranonkala manimba ny solosaina. Misy ny mety hisakanan'ny U-Block AddOn sary amin'ny Tumblr.
Izahay dia mitanisa fomba vitsivitsy izay azonao harahina hanamboarana ireo sary tsy manisy lesoka amin'ny Tumblr.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao alohan'ny hirosoana amin'ny fomba hafa dia ny manamarina ny fifandraisana amin'ny Internet. Raha manana fifandraisana Internet mahantra na tsy milamina ianao dia mety hahita olana amin'ny fidirana ao amin'ny kaontinao Tumblr, mainka fa ny fametrahana ireo sary eo amin'ny lampihazo. Noho izany, ny manamboatra ny sary Tumblr tsy mandiso lesoka dia azonao atao ny manaraka ireto dingana voalaza etsy ambany ireto:
1. Atombohy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny router. Esory ny tadin'ny herinaratra ary apetaho indray aorian'ny minitra iray na roa.
2. Mihazakazaka an fitsapana hafainganam-pandeha amin'ny Internet hijerena ny hafainganan'ny Internet.
3. Farany, mifandraisa amin'ny mpamatsy tolotra Internet anao raha ambany ny hafainganan'ny Internet.
Mpampiasa Tumblr maro no afaka nanamboatra ireo sary tsy mamoaka lesoka tamin'ny alàlan'ny famindrana fotsiny amin'ny browser hafa. Ohatra, raha mampiasa Google Chrome ianao, avy eo handaminana ny olana, dia afaka mifamadika amin'ny mpitsidika toa ny Opera, Microsoft Edge, na olon-kafa ianao.
Na izany aza, mamporisika ny hifindra any amin'ny Opera izahay satria manome endri-javatra tsara sy traikefa fitetezana haingana. Ankoatr'izay, ianao koa dia hahazo adblocker inbuilt, izay hisorohana ny pop-up doka. Ankoatr'izay, Opera dia manome sehatra azo antoka, ary azo inoana fa hamaha ny Tumblr tsy mampiditra lesoka sary.
Vakio ihany koa: Amboary ny bilaogy Tumblr tsy misokatra afa-tsy amin'ny Dashboard Mode
Raha nametraka ny fanitarana U-Block amin'ny tranokalanao ianao dia azonao atao ny mampandeha azy satria mety manakana sary sasany ao amin'ny Tumblr ny fanitarana ary manakana anao tsy hampiditra azy ireo. Noho izany, ny manamboatra ny sary Tumblr tsy mandiso lesoka dia azonao atao ny manaraka ireo dingana voalaza etsy ambany toy ny isaky ny tranokalaninao.
Raha mampiasa Google Chrome ianao, dia azonao atao ny manaraka ireo dingana nomena mba hanajanonana ny fanitarana U-Block.
1. Mandrosoa Google Chrome na raha efa mampiasa ny browser ianao dia mandehana amin'ny takelaka vaovao.
windows running scheduler tsy mandeha
2. Ankehitriny, tsindrio ny teboka telo mitsangana eo amin'ny zoro ambony ankavanan'ny efijery hidirana amin'ny menio.
3. Afindrao eo ambonin'ny safidy fitaovana bebe kokoa ary safidio fanitarana avy amin'ny menio.
4. Vonoy ny toggle eo akaikin'ny Fanitarana ny fiaviany U-Block na U-Block hampandeha azy.
5. Farany, alefaso indray ny browser web ary zahao raha efa nivaha ny lesoka fandefasana sary ao amin'ny Tumblr.
Ireo dingana dia mitovy amin'ny mpizaha hafa hafa, ary afaka mijery ireo pikantsary etsy ambony ianao.
Raha mampiasa Microsoft Edge ianao ho toy ny mpizaha toerana mahazatra anao dia araho ireo dingana nomena mba tsy hanajanonana ny fanitarana U-Block:
1. Mandrosoa Microsoft Edge amin'ny PC-nao ary kitiho ny teboka telo mitsangana eo amin'ny zorony ambony ankavanan'ny efijery hidirana amin'ny menio.
2. Safidio fanitarana avy amin'ny menio.
tsy afaka mamorona fizarazarana vaovao izahay na mitady toerana efa misy
3. Toerana ny Fanitarana U-Block ary tsindrio ny esory Safidy hanafoanana azy.
4. Farany, alefaso indray ny navigateur web ary mandehana mankany Tumblr.
Raha manana Firefox ho toy ny browser anao ianao dia ity misy fomba fampandehanana ny extension U-Block.
1. Sokafy ny Browser Firefox amin'ny rafitrao.
2. Tsindrio ny tsipika marindrano telo na ny bokotra menio avy eo amin'ny zoro havanana ambony amin'ny efijery.
3. Ankehitriny, tsindrio hametraka on ary safidio ny fanitarana na lohahevitra safidy.
4. Tsindrio ny Fanitarana U-Block ary safidio ny mampandeha safidy.
5. Farany, avereno indray ilay browser ary zahao raha voavaha ny olana.
Vakio ihany koa: Fomba 10 hanamboarana ny famoahana pejy miadana ao amin'ny Google Chrome
Raha mbola tsy vitanao ny manamboatra sary Tumblr tsy mampiditra lesoka, dia azo atao ny mametra anao tsy hiditra amin'ny sary sasany ny Tumblr noho ny fameperana ao amin'ny firenenao. Na izany aza, ny fampiasana rindrambaiko VPN dia afaka manampy ny toerana misy anao sy miditra amin'ny Tumblr avy amin'ny mpizara vahiny. Ny rindrambaiko VPN dia afaka manampy anao hanalavitra ny fameperana nataon'i Tumblr ao amin'ny firenenao na fanjakana misy anao.
Windows 10 laptop tsy miala amin'ny Wi-Fi
Alohan'ny hametrahana rindrambaiko VPN, alao antoka fa azo antoka izy ary miaraka amin'ny bandwidth tsy voafetra. Manoro hevitra an'ity rindrambaiko VPN manaraka ity izahay.
Raha tsy afaka mamoaka sary ao amin'ny Tumblr ianao dia azo atao fa be loatra ny mpizara satria mpampiasa betsaka no mampiasa ny sehatra miaraka amin'izay. Raha te hijery raha maty ny mpizara Tumblr dia azonao atao ny mampiasa ny satan'ny mpizara amin'ny alàlan'ny fitetezana azy Detector ambany , izay fitaovana hijerena ny satan'ny mpizara. Na izany aza, raha ambany ny mpizara, dia tsy afaka manao na inona na inona ianao amboary ny Tumblr fa tsy mampiditra sary fa hiandry mandra-pahatongan'ny serivera indray.
Fanontaniana napetraka matetika (FAQ)
F1. Fa maninona no tsy miakatra sary amin'ny tranokala?
Raha tsy mahita sary ianao na tsy afaka mamoaka izany amin'ny tranokala, dia amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny olana dia eo amin'ny faran'ny fa tsy ny pejin-tranonkala. Zahao ny fifandraisana Internet alohan'ny hidiranao amin'ilay tranonkala. Ny olana dia mety hipoitra ihany koa noho ny tsy fetezana fikirakirana fikirakirana. Noho izany, alao antoka fa halamanao araka ny tokony ho izy ny fikirana fitetezana amin'ny alàlan'ny fitetezana ny menio fanovana tranonkala Farany, alao antoka fa tsy hampandeha ireo fanitarana fanakanana doka amin'ny tranokala ianao satria mety hanakana sary ao amin'ny tranonkala izany.
F2. Fa maninona i Tumblr no tsy miasa amin'ny Chrome?
Tumblr dia mety hahita lesoka pesky indraindray ary avy eo. Raha te hanamboatra an'i Tumblr tsy mandeha amin'ny Chrome ianao dia azonao atao ny mamerina ny browser indray ary miditra ao amin'ny kaontinao indray. Zavatra iray hafa azonao atao ny mamafa ireo fisie cache ho an'ny Tumblr. Atsaharo ny fanitarana fanakanana doka amin'ny browser Chrome. Farany, ampiasao VPN handroahana ny toerana misy anao ary hiditra amin'ny Tumblr avy amin'ny mpizara vahiny.
Ka ireto no fomba sasany azonao andramana amboary ny sary Tumblr tsy mandiso lesoka . Manantena izahay fa nanampy ny mpitari-dalana anay, ary afaka namaha ny olana tao amin'ny Tumblr ianao. Raha manana fangatahana momba an'ity lahatsoratra ity ianao dia aza misalasala mametraka azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
tsy fahombiazan'ny fanjakana herinaratra mpamily 0x0000009f
Tsy hisokatra ny windowsflix amin'ny windows 10
tsy misy feo aorian'ny fanavaozana ny windows 10
maninona ny mpampita adiresy wifi no mijanona tsy tapaka
tsy afaka manova ny famaha windows 10
tsy misy fanamboarana default gateway
Tsy niasa intsony ny mikrô taorian'ny fanavaozana ny windows 10